Xarunta GECPD oo tababar u soo xirtay 20 dhallinyaro ah oo muddo 6 bilood ah baranayey farsamada gacanta. – Radio Daljir
Galkacyo, Nov 05 – Xarunta waxbarashada nabadda iyo hormarinta Galkacyo ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano GECPD, ayaa maanta tababar u soo xirtay 20 dhallinyaro ah oo muddo 6 bilood ah baranayey farsama gacanta.
Dhallinyaradaan oo dhammaantood ka soo jeeda qooysas danyar ah oo soo barakacay, ayaa muddo lix bilood ah baranayey macluumaad la xiriira xirfadaha farasamada gacanta waxaana mid ahaa waxyaabihii ay barteen Alxanka iyo Alwaaxa, xirfaddaasi oo qaabab badan isku jirta.
Munaasabadda dhallinyaradaan tababarka loogu soo xirayey oo ka dhacday xarunta GECPD ee ku taalla koontaroolka waqooyi ee magaalada Galkacyo, waxaa ka soo qaybgalay mas?uuliyiin kala duwan oo ka soctay maamulka gobolka Mudug iyo midka magaalada Galkacyo, mas?uuliyiinta hay?adaha xiriirka la leh xarunta oo ay ka mid ahayd hay?adda UNHCR oo iyadu bixisay fankii ku baxay tababarka dhallintaasi.
Aanimo Aadan Camey, oo ka mid ah mas?uuliyiinta xarunta GECPD ayaa halkaasi hadal kooban oo ay ka jeedisay ku tilmaantay mashruucaan in uu ahaa mid la doonayey in looga hortago sidii aysan dhallintu qoriga u qaadan lahayn iyagoo ka cararayey shaqo la?aanta ay badankeed sababto aqoon la?aantu.
Aamino, waxay intaas ku dartay dhallintaas qaar ka mid ah in ay u abuuri doonaan shaqooyin ku saabsan xirfadihii ay barteen, taas oo dhiiri-galin u noqonaysa dhallantaasi waxna ka badalaysa noloshii ay horay ugu jireen.
Duqa magaalada Galkacyo oo isna ka hadlay munaasabaddaasi ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay tallaabadaan dhallinta xirfadaha lagu baray si ay shaqo u abuurtaan, waxaana uu u mahadcelinayo xarunta GECPD oo iyadu tababarkaan fulisay, wuxuuna intaasi ku daray shaqadaan in ay tahay mid loo baahnaa dawladdu in ay dadkeeda u qabto.
Dhallinyaradaan oo tiradoodu ay ahayd 20 ayaa 10 ma mid ahi waxaa ay barteen xirfadda Alxanka, sida samaynta albaabada, daaqada, iyo waxkasta oo la xiriira alxanka, halka 10-ka kalana ay barteen samaynta miisaaska, kuraasta, armaajooyinka, iyo dhammaan agabka kale ee loo adeegsado xafiisyada iyo guryaha, waxaana qaarkood ay Daljir u sheegeen in ay heleen dalaabaad shaqo oo ku aaddan waxyaabihii ay barteen.
Ma ahan markii ugu horraysay oo dhallinyaro noocaan oo kale ah xarunta GECPD ay u fuliso tababar ku saabsan farsamada gacanta oo lacag la?aan ah, ee sanadkasta xaruntu waxay hirgalisaa tababarro kuwaan la mid ah oo loo sameeyo wiilal iyo gabdho dhammaantood ka soo jeeda dadka tabaalaysan.